सन् २०१८ का सबै भन्दा खराब पासवर्डहरूको सूची जारी, कतै तपाईंको पासवर्ड त परेन ? – Everest Dainik – News from Nepal
सन् २०१८ का सबै भन्दा खराब पासवर्डहरूको सूची जारी, कतै तपाईंको पासवर्ड त परेन ?
काठमाडौँ, पुस ९ । डिजिटल संसारमा पासवर्डको धेरै ठुलो महत्व छ । पासवर्ड अर्थात हाम्रा सबै डिजिटल सूचनाहरूसम्म पुग्ने साँचो । पासवार्डको सुरक्षा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले कस्ता कस्ता सूचना पासवर्डको मद्दतले सुरक्षित गरेका हुन्छौं भन्ने कुराले निर्धारित गर्दछ ।
हाम्रो इमेलमा रहेका गोप्य जानकारीहरू, बैंक खाता सम्बधी जानकारी र त्यससम्म पहुँच मात्रै होइन हाम्रा बायोमेट्रिक जानकारीहरू समेत पासवर्डद्वारा सुरक्षित रहन्छन् । त्यति मात्र होइन सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूका गोप्य दस्तावेजहरू समेत पासवर्ड संरक्षित रहेका हुन्छन । यसबाट पासवर्ड सुरक्षा कतिओ संवेदनशील छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले सजिलै अनुमान लगाउन सकिने खालका पासवर्डलाई ‘खराब पासवर्ड’ भन्ने गरिन्छ । पासवर्ड यवस्थापन कम्पनी ‘स्प्ल्याश डेटा’ले आजमात्रै २०१८ का सबैभन्दा खराब पासवर्डहरूको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले संसारभरी ह्याक गरिएका मध्ये ५० लाख भन्दा बढी डिजिटल खाताहरू विश्लेषण गरेको थियो । त्यसमा १० प्रतिशतले सुरक्षाको दृष्टिले खराब पासवर्ड प्रयोग गररेको पाइएको थियो ।
यस्ता पासवर्डहरू अन्यको तुलनामा सजिलै अनुमान लगाउन सकिने भएकोले ह्याक गर्न सजिलो भएको र यसले विद्युतीय जानकारी सजिलै चुहिने डर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्ता खराब पासवर्डहरूको सूचि जारी गर्दै कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूलाई अलग अलग अकाउन्टका लागि अलग अलग पासवर्ड प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ताकि ह्याकरहरूले एउटा खाताको पासवर्ड पत्ता लगाए पनि अन्य अकाउन्ट ह्याक गर्न नसकुन ।
कस्ता कता छन् खराब पासवर्ड?
स्प्ल्याश डेटाका अनुसार २०१७ र २०१८ मा खराब पासवर्डको शीर्षमा 123456 परेको छ । त्यस्तै password, iloveyou जस्ता पासवर्ड समेत लगातार खराबको सूचीमा परेका छन् । बढी जसो यस्ता पासवर्डमा सजिलै देखिने शब्दहरू छन् । जस्तो कि प्रयोगकर्ताहरूले कम्युटरको प्रयोग गर्ने क्रममा सजिलै देख्ने र अनुमान लगाउन सक्ने शब्दहरू अधिकतर यो सूचीमा छन् । त्यस्तै क्रमैसँग आउने अङ्कसमेत यो सूचीमा परेका छन् ।
कम्पनीले जारी गरेको सूचि अनुसार सन् २०१८ र २०१७ मा शीर्ष २५ खराब पासवर्ड
क्रम २०१८ २०१७
१ 123456 123456
२ password password
३ 123456789 12345678
४ 12345678 qwerty
५ 12345 12345
६ 111111 123456789
७ 1234567 letmein
८ sunshine 1234567
९ qwerty football
१० iloveyou iloveyou
११ princess admin
१२ admin welcome
१३ welcome monkey
१४ 666666 login
१५ abc123 abc123
१६ football starwars
१७ 123123 123123
१८ monkey dragon
१९ 654321 passw0rd
२० !@#$%^&* maste
२१ charlie hello
२२ aa123456 freedom
२३ donald whatever
२४ password1 qazwsx
२५ qwerty123 trustno1